ဆောင်းရာသီစစ်သားမော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
11 / 09 / 2021 11 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 228 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, ကဗျာ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
01 / 09 / 2021 01 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 351 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
23 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 357 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Avengers, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, Captain America, Captain America နှင့် Winter Soldier, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, hulk, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, Marvel's Avengers Infinity စစ်ပွဲ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier
Lego 71031 Marvel Studios 'Captain America သည် ပို၍ ပို၍ သက်ဆိုင်လာသည်
19 / 08 / 2021 19 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 204 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, အန်သိုနီ Mackie, Captain America, ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက် 4, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier
Anthony Mackie သည် Captain America4တွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရန် LEGO 71031 ၌သူ၏ minifigure ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုသတင်းများကဖော်ပြခဲ့သည်။ Marvel စတူဒီယို
06 / 08 / 2021 06 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 336 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76178 နေ့စဉ် Bugle, ဓါးရွက်, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဒီဇိုင်နာအင်တာဗျူး, ဝါသနာရှင်မီဒီယာနေ့များ 2021, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာ, Lego မှ marvel, Marvel, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်
28 / 07 / 2021 28 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 553 Views စာ0မှတ်ချက် 71026, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Dc, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego DC က, Lego မှ marvel, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
27 / 07 / 2021 27 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 650 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Agatha Harkness, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ကြောကျတိုငျ, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, သဘော, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်
23 / 04 / 2021 23 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 992 Views စာ0မှတ်ချက် Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Gamora, Lady Loki, Lego, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလများ, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, မော်နီကာရက်ဘို, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, ဆမ် Wilson, Scarlet စုန်းမ, Spider-Man, စတား-သခင်ဘုရား, စွန်ငှက်, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်, ဝှိုက်ဖြူ, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်